I-Semalt Expert ichaza ii-Best Scraping Websites
I-Web scraping iyinkqubo enenzuzo kubasesha boomabini kunye namashishini azama ukufumana ubuninzi beenkcukacha kwi-intanethi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. Ezi zilandelayo zi-website eziphezulu ezi-7 ezinikezela ukukhangela kwi-intanethi amathuluzi angcolileyo.
Yisiqalo esicacile kakhulu, apho abasebenzisi bayo banokukhupha yonke idatha abayidingayo kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. Isebenzisa ipolatifti elula ngeendlela ezininzi. Umzekelo, uphinde unikeze amathuluzi alula kakhulu kubaqalayo abangayazi indlela yokuhamba kwiziko.
Yilula ithuluzi le-web scraper , elinikeza iinketho ezininzi zokukhangela kwi-web searchers. Ngenxa yoko, banokwenza uphando olunzulu lwe-intanethi ukufumana nokugcina idatha abayidingayo ngokukhawuleza. I-Scraper yi-free tool ye-intanethi ye-extraction , enika ithuba kubasebenzisi bayo ukwenza i-XPath encinane.
I-Webhose.io yinkcazo yokuhamba, apho abasebenzisi bayo banokuqokelela yonke idatha ebalulekileyo kubo, njengoluhlu nemikhiqizo, ulwazi loqhagamshelwano, amanani kunye nokunye amafomathi ahlukeneyo kwikhompyutheni. Ngaphezu koko, kubanika ithuba lokukhangela amagama athile akwii-intanethi ezininzi kwiilwimi ezininzi, ngokusebenzisa izihlungi ezithile.
Abaphandi bewebhu bangasebenzisa le ndawo yesikhuliso sewebhu ngokulula ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na ikhowudi. Enyanisweni, banokwenza iifasethi zabo. Ngokomzekelo, banokukhangela ukufumana ulwazi abayidingayo kumakhasi amaninzi ewebhu kwaye banokuzigcina kwiifayile kwiidasethi zabo. Abantu banokukhangela amaphepha ewebhu amaninzi kwaye bafumana iziphumo zabo kwiminithi embalwa nje.
6. I-Content Trab
Inika abasebenzisi bayo amathuluzi amakhulu okukhutshwa kwewebhu. Ngenxa yoko, iinkcukacha ezininzi zokuvuna iikhabhi kwiiwebhu ezahlukeneyo, ngokusebenzisa i-agents zabo, ukuqokelela yonke into abayidingayo. Ngale ndlela, banokuhlalutya yonke inkcazelo, ukuze banqobe abakhuphiswano babo kunye nokunyusa ukusebenza kwenkampani yabo. Emva koko, abasebenzisi banokugcina yonke idatha kwikhompyutheni kwiifom ezahlukeneyo zeenkcukacha. Abasebenzisi banokukhipha yonke into eqokelelelwe idatha kwifom yokukhetha kwabo.
Yisofthiwe ye-web scrape software eyenza ngokuzenzekelayo, enika abasebenzisi bayo indawo yokuphuhlisa izityalo. Abaphandi bewebhu bangayifaka le nkqubo ngokuqwalasela okukhawulezayo nokulula kweefoworkwork workboards. Izixhobo ezikhethekileyo ze-UiPath ziyakwandiswa kwaye zivulekileyo, zivumela abaphandi bewebhu ukuba bazilungiselele iinkqubo ezininzi kwaye bazigcine kwiifolda zabo. Ngaphezu koko, iilayibrari enamandla yenza ukuba i-automation ibe yimpumelelo kuma-searchers web Source .